Vaovao - Ny fanantenana ho an'ny kitapo taratasy kraft
Kraft taratasy kitapo dia mifototra amin'ny pulp taratasy hazo, loko mizara ho fotsy taratasy kraft sy mavo taratasy kraft, afaka mampiasa fitaovana PP amin'ny taratasy miaraka amin'ny sosona ny sarimihetsika, tantera-drano vokany, kitapo tanjaka azo atao araka ny mpanjifa takiana ny iray ka enina sosona, pirinty ary fampidirana kitapo. Ny fomba famehezana misokatra sy ambany dia mizara ho tombo-kase hafanana, tombo-kase ary faran'ny farihy.
"Kitapo taratasy Kraft" dia kitapo vita amin'ny akora mifangaro. Noho ny toetra fiarovana tsy misy poizina, tsy misy tsirony ary voajanahary amin'ny famokarana kitapo taratasy kraft, ny "kitapo taratasy kraft" dia lasa vokatra fiarovana tontolo iainana eken'ny sehatra iraisam-pirenena nefa manome fahafaham-po ny fanjifan'ny maintso ataon'ny olona. Ny "kitapo taratasy kraft" dia hita eny rehetra eny amin'ireo toeram-pivarotana lehibe sy fivarotana lehibe eto an-toerana sy any ivelany. Izy dia toy ny mpiady kely, miaraka amintsika amin'ny fiainantsika isan'andro ary manampy antsika hizara ny enta-mavesatry ny fiainana.
Ny fahendrena mahazatra izay azon'ny olona vidiana fampiasa betsaka araka izay azony entina dia potika noho ny fahatongavan'ireo kitapo kitapo taratasy kraft, izay nanakana ny mpiantsena maro tsy hanahy ny amin'ny zavatra tsy zakany manimba ny andro fiantsenana. Raha ny fahaterahan'ny kitapo taratasy kraft dia nampiroborobo ny indostrian'ny mpivarotra iray manontolo, angamba ny fanitarana, saingy farafaharatsiny nampiharihary tranga iray ho an'ny orinasa, izany hoe, tamin'ny traikefa fiantsenana ho an'ny mpanjifa dia nanjary fihenan-tsasatra, mety, mahazo aina alohan'izay, tsy afaka maminavina tsotra izao hoe ohatrinona ny zavatra hovidin'ny mpanjifa. Izany indrindra dia noho io antony io, nahatonga ny olona taty aoriana hijery ny traikefan'ny fiantsenana ny mpanjifa, ary nampiroborobo ny fivoaran'ny sarety fiantsenana sy harona tao amin'ny fivarotana lehibe taty aoriana.
Ao anatin'ny antsasaky ny zato taona manaraka, vintana tsara ny fampandrosoana kitapo taratasy fividianana taratasy kraft. Ny fanatsarana ny kalitaon'ny fitaovana dia nanatsara ny fahaizany mitondra ary nahatonga ny endriny ho tsara tarehy hatrany. Ny mpanamboatra dia nanao pirinty ny karazana marika famantarana rehetra sy ny endrika kanto amin'ny harona taratasy ary niditra tao amin'ireo fivarotana sy fivarotana tamin'ny arabe ara-barotra. Mandra-pahatongan'ny antenatenan'ny taonjato faha-20, ny fisian'ny harona plastika dia lasa revolisiona lehibe teo amin'ny tantaran'ny kitapo fiantsenana. Kitapo plastika amin'ny vidiny ambany, kalitao mivaingana, tombony manify sy maivana, indray mandeha tsy misy fetra, kraft paper compound kitapo alokaloka. Nanomboka tamin'izay, ny harona plastika dia nanjary safidy voalohany tamin'ny fiainan'ny olona, ​​ny fehikibo omby "tsipika faharoa" tsikelikely. Farany, kitapo taratasy kraft dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny boky, akanjo, ary vokatra video somary kely amin'ny anarana "tontolo iainana", "voajanahary" ary "nostalgic".